Usinika iBrazil isicoco seNdebe yoMhlaba | Isolezwe
Usinika iBrazil isicoco seNdebe yoMhlaba
ezemidlalo / 12 June 2018, 3:28pm / nduduzo dladla
UMDLALI waseBrazil uNeymar Jnr okubhekwe ukuthi enze ezibukwa kwiFIFA World Cup eRussia. Isithombe: AP Photo/Ronald Zak
UBONA iBrazil kuyiyona ezokhala yemuke nesicoco seNdebe yoMhlaba u-Andre Arendse obengunozinti weBafana Bafana owavimbela elesizwe kwiNdebe yoMhlaba eKorea naseJapan ngo-2002. Imidlalo yeNdebe yoMhlaba eRussia izoqala ngoLwesine.
U-Arendse ongumqeqeshi wonozinti kwiSuperSport United aphinde abe ngumhlaziyi kanobhutshuzwayo esiteshini sethelevishini iSuperSport, uthe nakuba ompetha bomhlaba iGermany ne-Argentina elale isibili eminyakeni emine eyedlule bezoyidlisela ogageni iSelecao kepha ukuqina kwebhentshi lezikaTite yikona okuzozenza zimuke nalesi sicoco.
“Uma ngikhumbula kahle, iBrazil isayinqobe kanye iNdebe yoMhlaba e-Europe ngo-1958 lapho yashaya khona osokhaya iSweden ngo-5-2 kowamanqamu. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi amazwe ayedlala ayemancane kakhulu. Kubalulekile ukubhekisisa ibhentshi leqembu uma kuyimiqhudelwano emikhulu,” kusho u-Arendse.
“Ngokwami iBrazil ibophele izinkunzi eqenjini eliqala umdlalo, kuphinde kube ngesifanayo nasebhentshini. Kubalulekile futhi ukubhekisisa ukukleliswa kwamaqembu njengoba sibona ukuthi iGermany izihola phambili ilandelwe iyona iBrazil. Kodwa uma uqhathanisa indlela iGermany neBrazil abadlala ngayo, uyabona ukuthi iGermany sekuke kwaphela imidlalo emihlanu ingawini kanti iBrazil ishaya kwasani njengoba iqeda kubhaxabula i-Austria ngo-3-0,” kusho * -Arendse othe uNeymar umbona njengomdlali ozovalela amagoli amaningi kulo mqhudelwano.
U-ANDRE Arendse ongumqeqeshi wonozinti kwiSuperSport United uthipha iBrazil ukuthi imuke neNdebe yoMhlaba ka-2018 eqala ngoLwesine eRussia Isithombe: BACKPAGEPIX
Ngo-2002 ngesikhathi u-Arendse evimbela elesizwe eKorea naseJapan kwasala kancane baqophe umlando wokungena kweyomkhumulajezi okokuqala. Badlala ngokulingana neParaguay ngo-2-2 emdlalweni wokuqala, bashaya iSlovenia ngo-1-0 emdlalweni wesibili, kuthe sebeshoda ngephuzu ukuthi badlulele kweyomkhumulajezi bashaywa yiSpain ngo-3-2. Kulo mdlalo neSpain * -Arendse noLucas “Rhoo” Radebe basolwa ngokwenzela phansi iqembu njengoba bengakhulumanga egolini lesithathu elashaywa uRaul waseSpain. Ngaleso sikhathi iBafana Bafana yayicijwa ngu-Ephraim “Jomo” Sono.
Ngesikhathi leli phephandaba libuza lo mqeqeshi ngokuthi ubona ukuthi iyozala nkomoni emaqenjini ase-Afrika amahlanu kulo mqhudelwano, * -Arendse uthe: “Kuhle ukuthi amaqembu amaningi ase-Afrika anabadlali abahlonishwayo futhi abadlala ezigabeni eziphezulu emhlabeni. Lapha ngibala uMohamed Salah wase-Egypt noSado Mane waseSenegal abagijima kwiLiverpool abenze ezibukwayo kwi-Uefa Champions League neLiverpool. Kungakho ngibona ukuthi la mazwe womabili angenza kahle kulo mqhudelwano. Ngifuna ukuphuma iqhubu nokho neSenegal ngoba idlala kahle ngokubambisana njengeqembu, kayithembele kumuntu oyedwa. Iyona engiyibona izofika kweyomkhumulajezi ilingise iGhana ngo-2010.”
I-Afrika izomelwa yiNigeria, Tunisia, Egypt, Senegal neMorocco.
Umdlalo wokuqala uzoba phakathi kosokhaya iRussia ezotholana phezulu neSaudi Arabia eLuzhniki Stadium eMoscow, ngoLwesine ngo-5 ntambama.